गुल्मीबाट चुनावमा कस्ले कती खर्च गरे? हेर्नुस् यस्तो खर्च विवरण बुझाए जित्ने हार्ने उम्मेदवारहरुले – Gulminews
Home/मुख्य हेडलाईन/गुल्मीबाट चुनावमा कस्ले कती खर्च गरे? हेर्नुस् यस्तो खर्च विवरण बुझाए जित्ने हार्ने उम्मेदवारहरुले
गुल्मीबाट चुनावमा कस्ले कती खर्च गरे? हेर्नुस् यस्तो खर्च विवरण बुझाए जित्ने हार्ने उम्मेदवारहरुले
गुल्मीन्युज Follow on Twitter Send an email २०७४ माघ ९, मंगलवार १९:०७ मा प्रकाशित
०९ पुस, गुल्मी । २ प्रतिनिधिसभा र ४ प्रदेशसभामा उम्मेद्धारी दिएका कुल ५२ जनामध्ये ४२ जनाले निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएका छन् । विजयी उम्मेद्धारमध्ये प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नम्बर २ का उम्मेद्धार गोकर्ण विष्टले धेरै खर्च गरेको पाइएको छ ।
विष्टले २२ लाख ७४ हजार खर्च गरेको बिवरण जिल्ला निर्वाचन कार्यालय गुल्मीलाई बुझाएका छन् । त्यस्तै क्षेत्र नम्बर १ का विजय उम्मेद्धार प्रदिप ज्ञवालीले १८ लाख १ सय ७० खर्च गरेको कार्यलयले जानकारी दिएको छ । त्यस्तै निर्वाचन कार्यालयका अनुसार प्रदेशसभातर्फ विजयी उम्मेद्धारमध्ये सबैभन्दा धेरै क्षेत्र नम्बर १ प्रदेश १ का सुदर्शन बरालले खर्च गरेका छन् ।
बरालले १४ लाख ९२ हजार २ सय ६६ खर्च गरेका छन् । त्यस्तै क्षेत्र नम्बर १ प्रदेश २ का सासंद कमलराज श्रेष्ठले ८ लाख ९२ हजार २ सय ८० खर्च गरेको पाइएको छ । क्षेत्र नम्बर २ प्रदेश १ का सासंद खड्ग केसीले १४ लाख ४० हजार र प्रदेश २ का सासंद दिनेश पन्थीले १४ लाख १६ हजार ३ सय ७६ खर्च गरेको जिल्ला निर्वाचन कार्यलयले जनाएको छ ।
गुल्मीका २ प्रतिनिधिसभा र ४ प्रदेशसभा सबैमा एमाले र माओवादी केन्द्रको बाम गठबन्धनले जित हात पारको थियो ।
काङ्ग्रेसबाट प्रतिनिधिमा भण्डारी र प्रदेशमा पहराईले गरे धेरै खर्च
निर्वाचनमा सबै स्थानमा नेपाली काङ्ग्रेस प्रमुख प्रतिद्धन्द्धि रहेको थियो । काङ्ग्रेबाट प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा धेरै क्षेत्र नम्बर १ का उम्मेद्धार चन्द्र भण्डारीले गरेका छन् ।
भण्डारीले कुल २४ लाख २५ हजार खर्च गरेको विवरण निर्वाचन कार्यलयमा पेश गरेका छन् । त्यस्तै क्षेत्र नम्बर २ का उम्मेद्धार चन्द्र केसीले २४ लाख १७ हजार ५ सय खर्च गरेको पाइएको छ । काङ्ग्रेसबाटै प्रदेशसभामा उम्मेद्धार बनेकामध्ये सबैभन्दा धेरै क्षेत्र नम्बर २ प्रदेश २ का छन्दबहादुर पहाराईले गरेका छन् ।
पहराईले खर्च गर्न पाउने कुल रकम १५ लाख सबै नै खर्च गरेको विवरण पेश गरेका छन् । त्यस्तै क्षेत्र नम्बर १ प्रदेश १ का उम्मेद्धार पृथ बहादुर फौजदारले १४ लाख ८३ हजार १ सय र प्रदेश २ का उम्मेद्धार धनेन्द्र कर्कीले १४ लाख ७६ हजार ८ सय खर्च गरेको पाइएको छ । भने निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ को प्रदश १ का उम्मेद्धार शालिकराम पन्थीले १४ लाख ७५ हजार निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएको जिल्ला निर्वाचन कार्यलयले जनाएको छ ।